Mandehandeha fa tsy mihetsika - Eropa dia mankany Hannover
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mandehandeha nefa tsy mihetsika - Eropa dia mankany Hannover
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Mandehandeha nefa tsy mihetsika - Eropa dia mankany Hannover
Desambra 6, 2020
header herrenhausen twm panorama lehibe
Fitsidihana dizitaly amin'ny endrika 360 ° no anaovana azy: amin'izao fotoana izao, ny Herrenhäuser Gärten, ny lapa Nanas, Marienburg, ny kianja fampirantiana ary ny New Town Hall dia mamakivaky an'i Alemana sy Eropa. Ao Alemana, ny fampielezan-kevitra amin'ny haino aman-jery multimedia an'ny Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) dia hiseho ihany koa amin'ny fiaran-dalamby, gara sy bileta amin'ny tanàna anatiny, fa tsy ho nomerika fotsiny.
Hatramin'ny faran'ny volana Janoary, dia lamasinina roa ICE haingam-pandeha haingam-pandeha miaraka amin'ny marika Hannover fanta-daza amin'ny "360 ° - endrika eran-tany" no hitety ny firenena. Any amin'ny gara, toa ny any Kassel, Düsseldorf, Stuttgart, na Frankfurt, ary koa ny afovoan-tanàna avy any Hamburg ka hatrany Munich, dia hisarika ny saina amin'ny doka dokambarotra ny afisy lehibe.
Ny peta-drindrina tsirairay dia manasongadina fanasongadinana an'i Hannover izay manasa anao amin'ny dia virtoaly. Ny kaody QR amin'ny afisy dia mitondra mpandeha mivantana mankany amin'ny fitsidihana 360 ° virtoaly. Amin'ny alàlan'ny telefaona finday na tablety dia afaka mitsidika dizitaly ireo mpankafy an'i Hannover ary milentika amin'ny diany manokana mankany amin'ireo toerana misongadina ao amin'ny faritra Hannover. Ny topy maso ny fitsidihana rehetra dia azo jerena ao amin'ny: www.visit-hannover.com/360
Ny dokam-barotra amin'ny gazety isan'andro any Alemana Avaratra, ny dokambarotra an-tserasera manomboka any afovoan'i Alemana ka hatrany amorontsiraka, ary ny doka amin'ny sehatra media sosialy dia mameno ny hetsika any Alemana.
Any amin'ny firenena eropeana, toa an'i Great Britain, Sweden, Denmark, Netherlands, Belgique, Austria, Switzerland, Poland, Italia ary Spain, ny dokambarotra amin'ny fampiharana namboarina dia alefa amin'ny alàlan'ny finday ihany koa. Fanentanana manokana ho an'ny firenena amin'ny sehatra media sosialy, sora-baventy, doka ary fampidirana gazety eo anelanelan'ny Krismasy sy ny Taom-baovao eo amin'ny sehatry ny marketing. Ho fanampin'ny fanoloran-tena ho an'i Hannover virtoaly, hisy ihany koa ny fanasana hitsidika ny olona amin'ny taona ho avy, amin'ny teny filamatra hoe "Mijanona ho salama - hahita anao amin'ny 2021!"
Hans Nolte, Tale mpitantana ny HMTG, naneho hevitra: Ny fanentanana fanombohana ankehitriny ho an'ny 2021 dia mampiseho ny tanjaka ara-toekarena sy fizahan-tany an'i Hannover, na eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany fialantsasatra izany na eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. ”
Ny fampielezan-kevitra "Traveling without Moving" dia natomboky ny HMTG tamin'ny faran'ny volana martsa ary efa notohanana fitsangatsanganana vaovao sy fitsangatsanganana virtoaly nanomboka teo. Manisa ny fifandraisana maherin'ny 4.5 tapitrisa miaraka amina fotoana maharitra hatramin'ny 3 minitra amin'ny fitsangatsanganana 360 degre. Ankoatry ny fahitana fanta-daza dia malaza indrindra ny ivon-toeran'ny fampirantiana sy ireo toerana fivorian'ny fivoriambe. Amin'ity sehatra manan-danja ity ho an'ny faritra Hannover, ny biraon'ny HannoverKongress dia nahatsikaritra ny fitomboan'ny fangatahana kaonferansa sy fivoriambe ho an'ny 2021 hatramin'ny faran'ny volana novambra.